Indlela yokufakela i-Snowshoes kwi-Backpack yakho
Ifoto © Lisa Maloney
Izilwanyana ezinobuncwane zilungele ukunyuka kwebusika, kwaye ziphela kuphela izixa zomlilo ezixhomekeke kwi- postholing kwiintshukumo zentwasahlobo ngaphantsi kwekhefu elikhulayo. Kodwa ngokuphindaphindiweyo amaxesha ama-snowshoes ajika abe yinto ephazamisayo kunokuba uncedo, ingakumbi xa ushaya ipakethi yomhlaba ocacileyo okanye umzila ophethe. Kulo xesha uza kufuna ukukhupha iifowuni zakho kwaye uzifake kwi-backpack yakho.
Ayikho enye indlela epheleleyo yokubambisa i-snowshoes kwi- pack pack . Enyanisweni, kukho iindlela ezininzi ezithintekayo eziza kukhulula izandla zakho njengoko kuthwala izitshixo zokubamba ngezandla azilungele. Imifanekiso elandelayo ibonisa iindlela ezahlukahlukeneyo zokufakela i-snowshoes kwipakethi, kuxhomekeke kubukhulu bepakethe kunye nempawu.
Kodwa okokuqala, zizinto ezi-3 zokugcina engqondweni kungakhathaliseki ukuba yeyiphi ipakethe enayo:
Ukutshitshisa ama-snowshoes kunye nokucoca kunye kunye nokukhusela ipakethe ukususwa
Ukuba ama-snowshoes akakwazi ukufakwa kunye kunye nokucoca ndawonye, ​​ubuncinci qinisekisa ukuba i-cleats ijongene nayo kwaye ikude nepakethi
Ukuba ipakethi ayinayo i-straps efanelekileyo, i-bungee emfutshane (okanye amabini) yindlela efanelekileyo yokudibanisa i-snowshoes ngokukhuselekileyo
Iintambo zeCompression Straps
Ukuba ipakethe inezintambo zokuxinwa kwecala ezinde ngokwaneleyo ukuze zikwazi ukuhlala ezinqamlezweni, unokwenza nje udibanise enye indawo kwicala ngalinye kunye nezicatshulwa ezijongene nazo. Lo mfanekiso umzekelo weDeuter ACT Lite 45 + 10.
Iingeniso kukuba ikhuselekile kwaye akukho mfuneko eyongezelelweyo.
Ingqungquthela kukuba ifihla iibhotile zamanzi / iipokethi kwicala lomqolo.
Ukuba ipakethe inepaneli yangaphambili - kwaye iphaneli engekahlali ifowuni okanye enye igesi - ungasebenzisa iphaneli ukubeka iifowuni zakho njengoko ubona kwisithombe.
Vula uvule iphaneli, faka iifowuni zakho ezinamakhanda ngaphakathi komsila-wokuqala, uze udibanise okanye utshintshe iphaneli kwindawo ekhoyo. Kulo mfanekiso, ukuphakama okuphezu kweendlela zokukhwela ngeenqwelo zokukhwela kungakhuseleka ngaphezu kwentloko. Lo mfanekiso umzekelo iKelty 3800 Tornado ST.
Iinkonzo zolu khetho kukuba zikhawuleza, zilula kwaye zilula. Kukhuselekile kwaye akukho mfuneko eyongezelelweyo.
Nangona kunjalo, iingqungquthela kukuba iipopu ze-snowshoe ziyakwazi ukuphawula intloko yakho, kuxhomekeke kubude bakho kunye nobukhulu bepakethi.
Ukuba uhamba ngeepakethe encinci, njengeGeigerrig 500 eboniswe apha, unako ukudibanisa ama-snowshoes. Amanqatha amnyama, angqambileyo ahlonyelwe kulo mfanekiso yizintambo zokunyanzelisa, ezinokubamba izinkwenkwezi.
Iingqinisiso zokuxinwa kweengcingo zithi zikhawuleza kwaye zikulungele ukuphumeza. Ziyakukhuseleka kwaye akukho mfuneko eyongezelelweyo.
Ingqumbo kukuba umsebenzi wabo uphelelwe ubude bawo. Ukuqhaqhaqhaqhazela i-tad mfutshane kwaye ungashiyi indawo enkulu yokugxotha izinto kwipakethi ukuba i-snowshoes ifakwe.
Ukudibanisa ama-Snowshoes kunye neCong bungee
Ukuba ukuxinwa kweengcambu akude kwanele ngokwaneleyo ipakethi yakho, enye inketho kukukhawula intambo ye-bungee ephakamileyo ipakethe ukukhusela ii-snowshoes.
Thatha ipaki yeGeigerrig kulo mfanekiso apha njengomzekelo. Ngenxa yokuba ipakethe idibanise i-panti ye-ventilating kwipaneli yangemuva, intambo ye-bungee ingadlulela kwi-2 yale micimbi. Ngaloo ndlela, awuyi kuziva u-elastic against back you when wearing pack. Kwakhona, phawula ukuba i-bungee ihamba "kwindawo ephantsi" yezibophezelo ze-snowshoe. Yiyo ke loo nto i-snowshoes ayikwazi ukuhlahlela phantsi okanye phezulu.
Ngeepakethe ezinkulu, unokwalulela enye okanye ezimbini iimbambo ze-bungee ukusuka kwindawo enye yokuncedisa, malunga (okanye kungcono nakhona, ngokusebenzisa) i-snowshoes, emva koko kwelinye iqhosha lokunamathisela. Amanqaku amathintelo afanelekileyo afaka ietyunithi ezinobuncwane kunye naluphi na umgca wokuxinisa. Vela ukuphela kwebungee nganye ngeenxa zonke kwi-strap ngokwayo xa ufuna.
Iinkonzo kukuba iimbambo zebungee zikhawuleza kwaye kulula ukuyisebenzisa. Umqhamo kukuba awunamacandelo e-backpack ukwenzela ukuba ubababala ekhaya ungenalo inhlanhla. Kwakhona kuvimbela ukungena kwi-backpack.
Ngaphantsi kweLid Lid
Ukuba unayo ipakethe enegumbi eliphezulu eliphezulu, kukho indawo yokucima iindidi zeenkwenkwezi phantsi kwayo. Phakamisa nayiphi na into ehambayo epaketheni, i-cinch igumbi eliphambili livaliwe, ubeke izitambo ezinqamlekileyo kwindawo (ezidibeneyo kunye), uze udibanise igumbi eliphezulu phezu kwee-snowshoes.
Kulo mfanekiso wepakethe ye-Lowe Alpine Storm 25, enye yeengcambu zegumbi eliphezulu lifakwe kwiindawo zokuvuleka kuzo zombini ukuba zigcine zishenxise.
Kukhawuleza kwaye kulula ukwenza, kwaye akukho zixhobo ezifunekayo. Kodwa ii-snowshoes zinokukrazula xa zingagcinwanga ngokukhawuleza.
Indlela yokukhusela amanzi akho ngeempahla zePlastiki
I-Zip Zips: Ziziphi iindawo zabo kunye Nokuba kutheni zihlala zijikeleze
Iingxowa zee-Backpacks NgemiNombolo: UkuHlola nokuThola isiKhokelo
Indlela Yokugqoka Ngokufanelekileyo Ukunyuka Kwebusika: Ukubeka Isiseko
Uyaphi Uhambo? I-Backcountry vs. Frontcountry vs. Slackcountry
Izizathu ezi-5 zokuba kufuneka uhambe ngezintaba
Iimpawu eziphambili zeeNtaba zeeMfuno Zonke izidingo zokuqala
Uluhlu lokuPakisha kwi-Hikeight Hike
Iimpawu ezikhawulezayo kwiMinyaka ye-20 yeMinyaka yeMnyama
Iingqungquthela kwiNtetho kunye noBumbe
Iyiphi Imephu Yengqondo?
IYunivesithi yaseChicago GPA, i-SAT, kunye ne-ACT Data
Imbali yeMbali yaseMerika, iInts, kunye neNyaniso
Iindlela ezili-8 zokwenza iLangqa yeDolophu
I-Plate I-Tectonics ichazwe: IJunction
Jodi Picoult - Uninzi olukhutshwa ngokutsha
Umthetho wobuNkokeli besiNgesi
Ukuqonda Umlinganiselo kwi-Art
Indlela yokudibanisa "Repéter" (Ukuphindaphinda) ngesiFrentshi
I-Fat Definition - i-Kemistry Glossary
Ukwakha iziganeko zobume Iigama
Ukusebenzisa ukuKhanya OkuMnyama ukuqokelela iintyutyambo ebusuku
Indlela Yokwenza UThixo Ayolo
Uvela phi igama elithi "Ontario"?
Yintoni i-Pitchblende? (Uraninite)
Inkcazo yokukholelwa kuThixo, iNontheistic
Emva Kwiminyaka Eminyaka YeMfazwe
UC Santa Barbara GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Fumana iiNqununu ezinkulu zeeNdawo kunye ne-Longitude kwiMephu yeMhlaba
Indlela Yokwenza Iifoto Zakho Zize Zinyani
Lammas Ukupheka & Recipes